Tag: isiokwu isiokwu | Martech Zone
Tag: isiokwu olu
Keywords bụ asụsụ ndị mmadụ na-ahụkarị n ’olile anya gị, webusaiti gị na nsonaazụ nchọta achọtara na ha. Ha dị mkpa n’ ihi ịdị mkpa ha na ike ịtụgharị. Maka saịtị dị ka Martech, isiokwu ndị sara mbara nwere ike ịdị mkpa iji mee ka nleta. Mana nke ahụ bụ naanị n'ihi na nleta na ewu ewu zuru oke bụ ebumnuche nke blog a. Maka azụmahịa gị, nleta ekwesịghị ịbụ ihe ngosi izizi nke saịtị gị, ọ kwesịrị ịbụ ntụgharị gị. Ọtụtụ mgbe,
Ndị na-ere ahịa na-etinye oge ezumike ka ukwuu na ụbọchị izu ike. Mgbe m lechara ụmụ nwanne m anya nyochaa NORAD maka ọganihu Santa na mba ụwa, echere m na ọ ga-aba uru ịtụgharị uche na nsonaazụ ahịa dị mma maka oge ezumike ahụ. Ọ bụ ezie na uwe Santa Claus na-acha uhie uhie na nke ọcha bụ ebe nkịtị maka afọ ole na ole, Haddon Sundblom mere ka ụdị a sie ike site na ịmepụta ọtụtụ ihe atụ maka Coca-Cola na 1930s. Ebubere na mbụ iji nyere aka
Izu a ka m gụchara Righting the Mother Tongue: Site na Olde English ruo Email, Akụkọ Tangled nke Nkọwa Okwu Bekee nke David Wolman dere. O nwere ike ị gaghị ama ihe ederede na etymology bụ na ọ dị mma. Amaara m na m bụ onye na-egbu ụtọ asụsụ na mkpoputa, mana akwụkwọ a mere ka m nwee mmetụta nke ịka nka. E nwere ọtụtụ nde okwu n'asụsụ Bekee, mana nkezi ndị gụsịrị akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ sekọndrị maara banyere